नेकपाको बैठकले तय गरेका कार्यभारको कति छ प्रगति ? « Np Online TV
नेकपाको बैठकले तय गरेका कार्यभारको कति छ प्रगति ?
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी (२०७५ मङ्सिर २९ देखि पुस १३ सम्म चलेको) बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २२ पेज लामो राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।
प्रतिवेदनमाथि सचिवालय सदस्य बामदेव गौतम, स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल र हरिबोल गजुरेलेको लिखित र अन्य धेरै नेताको मौखिक असन्तुष्टि आयो । त्यसपछि अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले सबैको चासो सम्बोधन गर्ने र सचिवालयबाट अनुमोदन गराउने प्रतिबद्धता जनाएपछि स्थायी कमिटीले उक्त प्रतिवेदन पारित गर्यो ।
पारित प्रतिवेदनमा ‘आगामी कार्यभार’ शीर्षकमा पाँच पेज लामो योजना थिए । तर बैठक सकिएको झन्डै चार महिना पुग्दा पनि अधिकांश काम जस्ताको त्यस्तै छन्, अर्थात ती कार्यभारमा प्रगति भएकै छैन् ।
प्रतिवेदनमा पहिलो कार्यभारका रूपमा पार्टीको सङ्गठनात्मक एकीकरणलाई लिइएको थियो । यसमा विनाविलम्ब एक महिनाभित्र अर्थात माघ १५ गतेसम्म बाँकी रहेका सङ्गठनात्मक एकता टुङ्ग्याउने भनिएको थियो ।
राजनीतिक प्रतिवेदनमा एक महिनाभित्र सक्ने काममा विभिन्न केन्द्रीय निकाय (केन्द्रीय अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग, लेखा परीक्षण आयोग, सल्लाहकार परिषद्, ज्येष्ठ नागरिक मञ्च), ३२ केन्द्रीय विभाग, भूगोलका ७७ जिल्ला कमिटी, ४ विशेष जिल्ला कमिटी, सम्पर्क समन्वय कमिटी, प्रवास क्षेत्रका कमिटी, जनवर्गीय सङ्गठन, पार्टी सदस्यताको अद्यावधिक गर्ने भन्ने थियो ।
एकीकरणका लागि स्थायी कमिटी बैठकले ९ सदस्यीय शक्तिशाली कार्यदल बनाएको थियो । तर उक्त कार्यदल आफै विवादमा रुमलिए पछि स्थायी कमिटीले दिएको म्यान्डेट पूरा गर्न सकेन । बरु उक्त कार्यदल सचिवालयले भङ्ग गरिदियो । त्यसपछि कार्यदलका असन्तुष्ट केही सदस्यहरुले छुट्टै प्रतिवेदन अध्यक्षद्वयलाई बुझाए ।